Shan Talooyin Qaab-dhismeedka Kaarka Kirismaska ​​| Abuurista khadka tooska ah
Shan shey oo lacag la'aan ah kaararka kirismaska
Manuel Ramirez | | habyaalada, Kaararka kartoonka
La Kirismasku halkaan waa dhow yahay oo waxaan diyaarinaynaa geedaha kirismaska, diyaarinta hadiyadaha iyo qorshaynta liiska wax iibsiga si maalinta ciidda Kirismaska ​​wax miiska ka maqani uunan jirin. Maalin aad u qaas ah oo aan isku dayeyno inaan qoysaska oo dhan soo uruurino oo aan waqti fiican qaadanno.
Dhinacayaga waxaan ka saarnay badar yar oo ciid ah waana tan shan tusaalooyin kaararka fasaxa aad u fiican gebi ahaanba bilaash ah Iyaga waxaad ugu hambalyeyn kartaa kuwa aad jeceshahay ciida kirismaska ​​iyo asxaabtaas kale.
1 Kubadaha Kirismaska ​​Lacagta
2 Gaaladii Kirismaska
3 Baraf-barafka Kirismaska
4 Santa's sleigh
5 Geedka Kirismaska ​​ee gadaal
Kubadaha Kirismaska ​​Lacagta
Laga soo bilaabo Vecteezy waxaan leenahay a big taabashada Christmas kubadaha silver template iyo tayo. Kaarka Kirismaska ​​oo aad u qurux badan ayaa ah kan asxaabtaada ama dadka aad la xiriirto ay heli doonaan marka aad ka bedesho Photoshop.
Deerada waa mid xoolaha ugu astaanta badan ee ciidaha Kirismaska. Kaarkani wuxuu dhigayaa meel aad u qaas ah si aad uga soo dejisan karto adeegsi shaqsiyeed. Waxaad ku haysataa labada Ai, EPS, PDF iyo JPG labadaba si aad u sameyn kartid isbadallada u dhigma.
Mar labaad Vecteezy waxaan leenahay sheybaar kale oo kaamil ah oo aan ku qurxinno kaarka kirismaska. Waad heshay waxaa lagu heli karaa qaab vector ah, sidaa darteed waxaad ku sameyn kartaa waxaad rabto shaxdan.
Gawaarida Santa waa kaar tayo kale leh midab buluug ah oo dhoola cadeynaya ee qoyskaas ama saaxiibkaa qaata maalmahan qaaska ah. Vector kale oo tayo leh oo loogu talagalay Christmas sida kuwa maqaalkan.
Geedka Kirismaska ​​ee gadaal
Kuwa jecel dib-u-celinta tan Geedka kirismaska ​​oo leh qaabab qaloocan oo wanaagsan taasina waxay iska fogeyneysaa kuwii hore oo dhan. Iyada oo leh cod miyir leh iyo baraf baraf ah oo si fudud u ah goobo cad, kaar Kirismas ah oo gaar ah oo ka duwan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Kaararka kartoonka » Shan shey oo lacag la'aan ah kaararka kirismaska
Xidhiidhyada waxay ku geynayaan bogga soo dejinta!
Isbedelka otomaatiga ah ee Adobe Lightroom wuxuu hadda adeegsadaa Cilmiga Sirdoonka
Pantone wuxuu muujinayaa midabkiisa 2018 ee sanadka: ultraviolet